Iziqondiso Zezinsimbi Nokulungiswa Kwezingqwembe Zohlelo Lokuhambisa Umzila - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Ukuqondiswa kocingo nokulungiswa kohlelo lwezinkinobho ezihamba phambili
Izikhombisi Zamafayela Kanye Nokulungiswa Kwamasondo Uhlelo lokuhamba olumane
Ukuphathwa komugqa kuyisistimu yokuhamba ngendlela ehambisana nokukhiqizwa kwezindleko eziphansi, okusetshenziselwa i-axis engavamile yokuhamba kanye ne-cylindrical axis. Ngenxa yokuxhumana phakathi kwebhola ne-shaft, umthwalo omncane. Ibhola le-spins lensimbi elinokumelana okuncane ukukhathala ukufeza ukuhamba okuqondile.
Amaphethini emigqa evamile akhethiwe (20) amabhethini emigqa eqondile asetshenziselwa ngokuhlanganyela ne-quenching line shaft. Uhlelo lokuhamba okungenamkhawulo okuhambisanayo. Ukulayisha umshini wokugoqa nokucima ngenxa yocingo lokuxhumana naye, umthwalo ovumelekile uyingcosana, kodwa ukumelana nokukhathala kuyinto encane, ukunemba kuphakeme futhi ukunyakaza kuyashesha.
(1) ukubhekelana okulinganiselwe okuhambisanayo, umugqa ophakathi komgwaqo, obala ovulekile olayini ophetheyo, umugqa oqondile ohambisana nomthwalo wendawo yonke
(2) ukufakwa komugqa wendwangu kungahlukaniswa ngokuthi: uhlobo lwama-round flange, uhlobo lwendlela, uhlobo lwe-elliptical flange, i-flange nxazonke eqondiswayo, indlela yokuqondisa, uqondise uhlobo lwama-fllip elliptical, uhlobo olubanzi lwama flange. Ngokusho kwamaphuzu ajwayelekile: ukuphathwa okulinganiselwe kuhlukaniswe ngochungechunge lwe-LM kanye ne-LME series. Uchungechunge lwalo lwe-LM olusetshenziswa e-Asia, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eJapane, eNingizimu Korea, eChina, njll. Kuhlelo lwe-metric, ukubekezelelana kwe-axis ngqo yi-h7. Uchungechunge lwe-LME lisetshenziswa eYurophu, e-USA, eJalimane nase-Italy. Ubukhulu obujwayelekile besistimu yaseBrithani buyi-metric, futhi ukusabalalisa ububanzi obungaphandle be-axis ngqo yi-g6. Izici zezinhlaka zombili zochungechunge zihlukile ngobukhulu nosayizi, futhi isakhiwo sabo sifana.
1: i-tube eqondile (efana ne-cylinder, evame ukufakwa nge-spring spring ukuze kube nokufakwa okuncane)
2: ama-flanges (ekugcineni noma emkhatsini we-flange yokufaka, angafakwa ngama-screws, flanged, round, square and cut cut)
3: ukuvula umlomo (okufana ne-tube eqondile, ene-axial cut surface, esetshenziselwa ukulungiswa kwe-interstitial, ukuhlukaniswa okuvulekile nokuvuleka okuncane 2)
Ngokusho kwamaphuzu okusebenza:
Okujwayelekile (izidingo zokusebenza jikelele)
I-Supertype (ukuphila okude nokusebenza komthwalo osindayo)
UKUSEBENZISA ukuphathwa okuhambisanayo kuye kwasetshenziswa kabanzi kwi-electronics, imishini yokudla, imishini yokupakisha, imishini yezokwelapha, imishini yokunyathelisa, imishini yombumbulu, imishini, ithuluzi, ama-robot, amathuluzi, imishini, amathuluzi omshini we-CNC, imoto kanye neminye imikhiqizo yomshini jikelele noma imishini ekhethekile. Ukuqondiswa komugqa ohamba phambili kuyingxenye yabantu abajwayele ukubizwa ngokuthi, ngokuvamile kubhekisela ku-axis ebonakalayo (kufaka phakathi zonke izinhlobo ze-block line bearing bearing block), i-axis guide axis, i-linear yesitimela yokuhambisa isitimela (okubandakanya izingxenye ezihamba phambili eziqondiswayo kanye ne-flange guide guide shaft ukuthwala).
Ukubopha Nge-Sleeve Inner Kusekela Umzimba Rotary Body
I-Miniature Deep Groove Ball Bearings Isingeniso Semikhiqizo